Ahoana ny fomba fangatahana ny volavolan-dalàna fambolena 2018 momba ny fiompiana ary mety na marijuana
Ahoana ny fomba fangatahana volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018
Te-hanao tanimboly Hemp ianao?
Ahoana ny fomba fangatahana volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018 any Etazonia
Hemp ara-dalàna any Etazonia nanomboka tamin'ny 20 desambra 2018.
Nanao ny tantara tamin'ny filoha ara-dalàna ny filoha Trump rehefa nanao sonia ny Lalàna fanatsarana ny fambolena tamin'ny taona 2019 (aka ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018) ny 20 desambra 2018. Ny lalàna goavambe dia nahitana ny fanovana voalohany ny lalàna rongony nasionaly tao anatin'ny efa ho dimampolo taona. Nanokatra ny vavahady tondra-drano ho an'ireo tantsaha te hiditra amin'ny indostrian'ny hemp mba hanome vokatra vaovao hanampiana ny fiakaran'ny vidin'ny entam-barotra.
Takeaways avy amin'ny volavolan-dalàna momba ny fambolena ho an'ny Hemp
Nesorina hemp indostrialy avy ao amin'ny Lalàna mifehy ny fifehezana;
Hetsika indostrialy voafaritra ho toy ny cannabis sativa tsy latsaky ny 0.3% Delta-9 THC amin'ny lanja maina;
varotra interstate ara-dalàna ao amin'ny hemp indostrialy;
apetraho ny USDA ho toy ny masoivoho hamorona ny fitsipika ho an'ny hemp indostrialy.
Ny famokarana hemp indostrialy dia mbola tsy fanarahan-dalàna raha toa ka tsy misy fahazoan-dàlana USDA, na amin'ny fanjakana tsy misy drafitra famokarana hemp indostrian'ny fankatoavana USDA.
Hemp dia avo amin'ny cannabidiol (CBD), fa miaraka amin'ny tetrahydrocannabinol (THC) ara-dalàna
Ny fihenan-tsakafo mazoto dia tena ambany ao amin'ny Delta-9 THC
Hemp Alohan'ny volavolan-dalàna fambolena 2018
Na dia talohan'ny volavolan'ny volavolan-dalàna momba ny indostria 2018 ara-dalàna tanteraka dia ny programa pilotan'ny taona 2014 izay notarihan'i Senatera Mitch McConnell (R-KY) dia nanome programa kely kokoa hitrandrahana ny entana vaovao any amin'ny fanjakana isan-karazany. Nanjary be mpitia ao amin'ny fanjakana mpamokatra paraky nanodidina an'i Kentucky ny fandaharan'asan'ny mpanamory, ary nanome voly tena izy ho an'ny tantsaha voatery hiala amin'ny sigara satria nitombo hatrany ny lazany.
Ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2014 mikasika ny lafiny fikarohana ny ahitra indostrialy dia mbola hampiharina mandra-pahatongan'ny USDA hamoaka ny lalàna mifehy azy farany amin'ny faran'ny 2019, na farafaharatsiny alohan'ny taom-pambolena 2020. Ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2014 dia nitaky ny fikarohana hemp hanaraka ny programa mpanamory fiaramanidina hemp mitovy amin'izany mba hisorohana ny fanelingelenana ataon'ny DEA. Ireo lalàna ireo dia hitohy mandra-pahatongan'ny lalàna farany.
Raha samy sativa cannabis na dia ny hemp dia voafaritra ara-dalàna ho ilay zavamaniry izay tsy latsaky ny 0.3% THC, raha i marijuana kosa manana mihoatra ny 0.3%.
Ahoana ny fomba fampiakarana ny volavolan-dalàna amin'ny fambolena 2018 amin'ny CBD
Ny CBD hemp dia manana vidiny mora, izay hatramin'ny aprily 2019, dia $ 4.00 isaky ny kilao isaky ny isan-jaton'ny CBD. Ny ankamaroan'ny hemp indostrialy dia manodidina ny 10-12% CBD. Aorian'ny fijinjana azy, ny voninkazo dia "schucked" amin'ny ambin'ilay zavamaniry ary amidy amin'ny kilao. Ny voninkazo hemp manan-karena CBD dia avy eo namaky ny fitrandrahana izay manasaraka ny zavamaniry amin'ny cannabinoids. Ny fizotry ny fitrandrahana dia mety hiteraka vonjimaika ny habetsahan'ny THC ao amin'ilay fitrandrahana mba hihoatra ny fetra 0.3% ho an'ny hemp indostrialy, saingy azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanodinana bebe kokoa izany ary koa mitranga aorian'ny fanandramana ny hemp ho avo indrindra.
Talohan'ny volavolan-dalàna fambolena 2018, Orinasa CBD niasa tamin'ny sata ara-dalàna iray izay nanararaotra ny politikan'ny Departemantan'ny Fitsarana, toa ny Cole Memo, izay nahafahan'ny orinasa mpanefy lalàna miady amin'ny rongony (rongony rongony, fampiasana olon-dehibe, na hemp indostrialy) miasa tsy misy fitsabahana federaly.
Taorian'ny fampiakarana ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018, ny orinasa CBD dia nanery ny famokarana sy ny fitenenana sasany momba ny CBD izay nanondraka ny hantsana tamin'ny fitantanana sakafo sy ny fanafody (FDA).
Fitsipika FDA ho an'ny vokatra CBD Hemp
Ny fitsipiky ny FDA dia manakana ireo orinasan-tsakafo famenon'ahitra tsy hanao fanambarana diso fa ny vokatr'izy ireo dia mandaitra amin'ny fitsaboana na fisorohana aretina sasany. Izany no antony mahatonga ny ankamaroan'ny tavoahangy famenon'ahitra, na vitamina-C na CBD, toa izao:
Ireo fanambarana ireo dia tsy nohombatombanan'ny tompon'andraikitra amin'ny sakafo sy ny fanafody. Ity vokatra ity dia tsy natao hanaovana diagnostika, hitsaboana, hanasitranana na hisorohana aretina.
Fanamafisana kokoa ny fitsipiky ny FDA, nankatoaviny ny fanafody presdeta CBD, Epidolex, izany dia kinova madinidinika amin'ny zava-mahadomelina, izay midika fa tsy tafiditra ao anatin'ny sakafo io fanafody ekena io. Na izany aza, ny hemp-hemp - ohatra ny hashish - dia efa an-jatony maro no namatsy sakafo raha tsy an'arivony taona maro. Izany no iray amin'ireo antony mahatonga ny ankamaroan'ny vokatra CBD tsy hanao dokam-barotra fa tsy hoe simika CBD fotsiny, fa toy ny "fitrandrahana hemp-feno."
Ahoana ny famaritana ny lalàna mifehy rongony marika Hemp (mety)
Ny tsirinaina rehetra, na rongony na hemp dia misy ambany latsaky ny 9-THC amin'ny endriny maniry fambolena. Na izany aza, ny volavolan-dalàna momba ny toeram-pambolena 2018 dia namaritra ny hemp izay manana latsaky ny 0.3% delta-9 THC. Ny ankamaroan'ny rongony dia latsaka ao ambanin'io famaritana io, mandra-pahamafana azy mihoatra ny 250 degre Fahrenheit, rehefa ny asidra ao aminy dia miendrika anaty delta-9 THC.
Vokatr'izany, ny ankabeazan'ny hemp indostrialy dia mety hahatratra eo amin'ny 0.7% eo ho eo amin'ny totalin'ny THC, fa tsy dia kely lavitra noho izany 0.3% delta-9 THC. Ny mpamokatra hemp dia nisafidy ny hizaha ny zavamaniry cannabis miaraka amin'ny chromatograpika ranon-tsolika avo lenta, izay mizaha ireo vokatra simika tsy misy hafanana, manohitra ny chromatograpika entona, izay mihinana azy ary miteraka vokatra ratsy.
Somes dia nilaza, toa an'i Illinois, dia nandidy tamin'ny alàlan'ny fitsipiny fa ny hemp dia tsy maintsy hosedraina aorian'ny decarboxylation. Io dia manamboatra ny olana satria tsy misy afaka mitaky ny totalin'ny THC any ho any fa tsy manisa, fa ny delta-9 THC tsy misy fotsiny. Ho hitantsika amin'ny faran'ny taona 2019 ny famaritan'ny USDA ny fitsipiny momba ny fitsapana.
Ny volavolan-dalàna momba ny varotra fambolena 2018 momba ny fiompiana ara-dalàna ao Hemp
Ny pejy 435 amin'ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2018 dia nanome torolàlana ho an'ny fanjakana fa ara-dalàna ny hemp indostrialy ary toy izany koa ny varotra. manome izany:
SEC. 10114. ANTOMPOANA ENTANA. (a) RANO FIKAMBANANA.-Tsy misy ao amin'ity lohateny ity na fanitsiana ataon'ity lohateny ity izay mandrara ny varotra interstate hemp (toy ny voafaritry ny fizarana 297A amin'ny lalàna momba ny fambolena sy fiompiana momba ny fambolena tamin'ny 1946 (asan'ny fizarana 10113)) na vokatra hemp. (b) FAMPANANTANANA NY HEMP SY HEMP FAMPIANARANA. — Tsy misy Fanjakana na Tribe Indiana tsy mandrara ny fitaterana na ny fandefasana vokatra hemp na hemp vokarina mifanaraka amin'ny andian-dahatsoratra G ao amin'ny Lalànan'ny Marketing momba ny fambolena tamin'ny 1946 (araka ny fizarana 10113) amin'ny alàlan'ny Fanjakana. na ny faritanin'ny foko Indiana, raha azo ampiharina.